တယ်လီကွန်းမျှော်စင် ထုတ်လုပ်သူများ - China Telecom Tower Factory, Suppliers
Wi-Fi တာဝါတိုင်များသည် မိုင် 60 အထိ တိုက်ရိုက်အချက်ပြလမ်းကြောင်းကို ထုတ်လွှတ်သည့် တာဝါတိုင်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကြားတွင် အတားအဆီးမရှိသော မြင်ကွင်းရှိမှသာ အခြား Wi-Fi တာဝါတိုင်များနှင့်သာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Wifi မျှော်စင်များ ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှာဖွေပါ၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် လက်ကားရောင်းချသည့် wifi တာဝါတိုင်များ. စက်ရုံတိုက်ရိုက်မှ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Wifi Tower ကို ယခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Telecom Wifi Microwave Lattice Tower
Camouflage သည် ရှုခင်းသာနေရာများနှင့် အခြားနေရာများတွင် ဘူတာရုံများတည်ဆောက်ရာတွင် အခက်အခဲပြဿနာကို အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်၀န်းကျင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်အား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးသည်။ ထုတ်ကုန်သည် သစ်ပင်များအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့်ဓာတုကုန်ကြမ်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဓာတုအစေးကို အသုံးပြုထားသည်။ ဝါးလုံးများ၊ သစ်ပင်အဖုများ၊ အခေါက်များ၊ အမြစ်များ စသည်တို့ကဲ့သို့ ပန်းပုအလွှာများကို မျက်နှာပြင်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ တာရှည်ခံစေရန်၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် အဆင့်မြင့် acrylic ဆေးဖြင့် ဖျန်းပေးထားပါသည်။
တယ်လီကွန်းတာဝါ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါသည် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုမျှော်စင် သို့မဟုတ် အချက်ပြတာဝါတိုင်ဟုခေါ်သော အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုမျှော်စင်အမျိုးအစားတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ပင်မလုပ်ဆောင်ချက်သည် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အချက်ပြထုတ်လွှင့်ခြင်း အင်တင်နာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ မိုဘိုင်း/unicom/traffic ဂြိုလ်တုတည်နေရာပြစနစ် (GPS) နှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနများကို အသုံးပြုသည်။ မီးသတ်လေ့ကျင့်ရေးမျှော်စင်။ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တွင် တာဝါတိုင်ကိုယ်ထည်၊ ပလပ်ဖောင်း၊ လျှပ်စီးတံ၊ လှေကား၊ အင်တင်နာပံ့ပိုးမှုစသည့် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်၊ တစ်နေရာတည်းတွင်ဝယ်ယူရေး၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုများ၊ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၊ ပိုမိုသိရှိနိုင်သော အချက်အလက်များ၊ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်။
. လျှပ်စစ်ပါဝါမျှော်စင် တယ်လီကွန်းတာဝါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံ အလင်းတိုင်များ PV တပ်ဆင်ခြင်း တည်ဆောက်ပုံ Self Supported Tower Steel Standard: API 5L၊EN 10208-1၊ EN 10208-2၊ DIN 2470-1/1629။ 1. Line pipe dimentions- Thickness: 8mm-60mm, Width: 1500mm-4020mm, Length:3000mm-18000mm။ 2. ပေးပို့မှုအခြေအနေ- ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်း၊ မီးငြိမ်းပြီး အပူချိန်ကို ထိန်းပေးခြင်း။ 3. အဆုံးအမျိုးအစားများ- bevel end၊ ရိုးရိုးအဆုံး၊ threaded en...